Mai Chibwe VekwaZimuto: Ko sei vakadzi tichipfeka mabhurugwa
Zvibvunze kuti sei wakapfeka bhurugwa pasi pedhirezi iwe pasina kwauri kuenda nhasi? Munongori vaviri iwe nomurume wako nezvivana zvenyu zvisingatombozivi kuti une bhurugwa here kana kwete. Nyaya iri papi iyi? Pane imwe psychology here apa?
Ukatarisa kare mabwe dzichi nhuku, ndingati kusvika kuma 1970 chakuti uko waiona kuti vakadzi vakawandisa muZimbabwe vange vasingapfeki mabhurugwa. Kwaitozoti kana ofamba gwendo pamwe opfeka bhurugwa. Ukabvunza vanhu vanoshanda nezvama AMBURENZI vaya vanokuudza nyaya iyi nokuti vanhu vakawanda vaikuvara mumigwagwa umu voendeswa kuzvipatara vasina mabhurugwa.
Nyaya yokupfeka mabhurugwa echikadzi (UNDERWEAR) yakauya zvishoma nezvishoma kuzosvika yazadza nyika yese. Ikozvino chero chembere dzakura dzava kupfekawo mabhurugwa.
Vakuru vedu vaipfeka nhembe mbiri imwe mberi imwe sure, pasina kana bhurugwa. Ipapo waiti kana ukabata musikana chibharo waisungwa woendeswa kwashe kunotongwa. Pedzezvo wonzi chitora mukadzi wacho aite wako wobvisa fuma. Majeri kwange kusina. Vakadzi vakuru vange vachitotyisa kubata chibharo asi vaingofamba mazamu ari pazhe mativi achiuno achionekwa.
Nhasiuno tinopfeka dhirezi rinovhara muviri kusvika pasi pemabvi, mukati topfekazve bhurugwa ne bhuraziye yemazamu. Kune dzimwe nzwimbo mu Zimbabwe, kwahi ukabatwa chibharo bhinya rikakubvarurira bhurugwa, unotokwanisa kuendesa bhurugwa racho kumapurisa woti rinoratidza kuti pakaitwa ganyabvu. Saka kana usina bhurugwa musi iwoyo zvinofamba sei? Zvoita sokuti bhurugwa ndiro riri pakati pako nebhinya.
Ndakambobvunza varume kuti sei vachipfeka Underwear, ndikatoona kuti vashoma vane mhinduro yacho, Umwe akati anopfeka nokuti akasapfeka anokwanisa kubata chombo nezipi paanoenda kutoiret zvinova zvinogwadza, umwe akati bhurugwa romukati rinobata zvinhu zvake kuti kana akatanga kumhanya zvisango jaivha zvichionekwa. Umwewo akati underwear inofanira kungopekwa navarume kuti paanoweta anodonhedza weti atobuda mutoireti saka kana asina bhurugwa romukati kunyorova kunozoonekwa pamberi, zvomusvodesa. Kara vanhu vakuru vange vasingaweti here?
Isu vakadzi tinoti tikanoweta mutoireti tinopisika munhu ozobuda asina chingadonha. Tinoweta takagara uye hapana chokubata nezipi, uye kana ndichimhanya hapana chinoonekwa. Saka isu tinopfekerei mabhurugwa. Ndakabvunza vasikana kubasa zvikahi noumwe, “Ndopfekera kuti kana ndikaita zvipusha ndikazomukira kuchipatara chokutanga ndoda kuziva kuti hapana andibata pamberi.” Umwewo akati hazvingoitiwo hazvo kuti abude mumba asina bhurugwa. Rhiseni chaiyo inonetsa kuiwana asi vanhu vongopfeka mabhurugwa vasina kufunga kuti vanozviitirei.
Varumewo vanoona sokuti mukadzi ane bhurugwa ane unhu kupfuura anofamba asina. Kwahi na Timbe wekuNigeria, “Mukadzi anofamba asina bhurugwa ari kutsvaka rhoji.” Ini ndokumubvunza kuti vasikana vese vaunoona mutawundhi manheru eChina neChishanu vakapfeka zvimatambho netumicheka zvidya nomusana zviri pazhe vanenge vasina mabhurugwa here? Zvikahi bodo. Ndikati saka zvawataura hazvishandi nokuti vazhinji vavo vanenge vachitotsvaka rhoji.
Saka bhurugwa rava paneimwe STATUS yarange risina kare. Umwe musi ndokufonera murume ndiri kuTESCO kumubvunza pane chaanoda kuti nditenge here. Tiri kutaura kudaro ndokumuudza kuti ndauya kuTESCO ndisina bhurugwa. Ndikahwa munhu otochinja hwi rake obvunza kuti “ARE YOU OK?” atova mu PROTECTION MODE, nenyaya yokungoti handina bhurugwa. Tava kumba ndihwe munhu oda kutohwisisa kuti sei ndaenda kuTesco ndisina bhurugwa. Ini kwava kutozotsanangura kuti kana ndiri off mazuva akawanda handipfeki bhurugwa. Zvokuti ndazoenda kuSUPERMARET ndakadaro hazvina kana basa. Ndikati iwe Sunday haupfeki Underwear wani zvakangofanana, Kwahi bodo iwe uri mukadzi ini ndiri murume, ini ndokubvunza kuti kuva mukadzi kana murume zviri muUNDERWEAR here?
Varume vanoona sokuti Underwear ine basa guru kupfuura zvatinoona isu. Tiri kuchikoro waihwa mukomana achikubvunza kuti wakapfeka underwear yerudzii? Hameno kuti vaiita sei nekuziva rudzi gwebhurugwa remusikana. Kana muchitamba masipoti ukakotama akaona kuti une bhurugwa rorudzii, anozokuudza wava umwe musi kureva kuti anga achizvifunga pese apa.
Bhurugwa remukadzi harisi bhurugwa chete. Murume akaona bhurugwa rako wakagara zvisizvo muchitima kana pabhenji, anoita zemo kupfuura zvaanoita kana akaona panhu chaipo. Varume vane nyaya nemabhurugwa edu. Mukadzi ane murume mumba anofanira kuhwisisa kuti bhurugwa rake chinhu chinokosha panyaya dzomumba. Kana uri kumwedzi unopfeka zibhurugwa ronoputira zvakawanda, woisa zvinhu mukati maro kuti usazvibisa machira. Murume akakuona wakaripfeka iroro anobva atoti fototo nokuti anoziva kuti rhoji hakuna nhasi.
Kana matukana ukapinda mumachira wakapfeka bhurugwa anoshungurudzwa nazvo nokuti uri kumuudza kuti rhoji hakuna nhasi kusvika tagadzirisa nyaya dzedu (Kusahwisa uku. Usambofa wakaita izvi kumurume wako kana uchida kuva naye kwenguva refu) Kana akachenjera akangoona wamupfekera bhurugwa pakunovata anobva atotanga kupira nyaya yake kuti ahwisiswe mutaurirane. Iwe chiregawo kumubingisa. Kana ataura zvakafanira, tenda murume wako ubve wamutaridzawo kuti iye ndiye murume wako. Chibvisa bhurugwa utange kutamba naye.
Pakunovata, ukabvisa bhurugwa wega usati wapinda mumachira zvoreva kuti wakazvigadzirira kuita mabasa emuimba yokuvata.
Pamwewo ukapfeka rimwe bhurugwa rakadhekoretwa zvakanaka, rinowedzera zemo romurume. Iwewo imbofamba famba wakaripfeka uchaona achikutevera nemaziso. Pane zvaari kufunga.
Pane mabhurugwa akangoita setambho rokuti kana ukaripfeka katambho kacho kanopinda pakati emagaro, kuno kumberi kunenge kune kamucheka kadikidiki kakafukidzira chitubu chete. Rinohi THONG. Iwawa mabhurugwa anokwanisika kuti murume apinze chombo iwe wakaripfeka. Kungorikwevera kudivi otopinza. Hapana nebhurugwa riripo ipapo. Varume vanomafarira mabhurugwa awa.
Chionazve rimwe bhurugwa rakapatsana pakati zvokuti iro bhurugwa racho rine chitubu. Rinohi crotchless knickers rakatosonwa rakaitigwa kuti urhojewe wakaripfeka, Mucheka waro ndewe SILK inova yakatsetseka zvokuti pakurhojana murume anofarirawo kupurudzigwa nayo. Imbova nawo mabhurugwa awa uone kuti murume wako anozvitora sei.
Kubvisira murume bhurugwa zvinotaridza kuti wada kuti arhoje. Mumba menyu unokwanisa kumuti iye akubvise bhurugwa kuratidza kuti ari kuda kukurhoja. Zviri kwamuri kuti anobvisa bhurugwa rako ndiani asi hwisisa kuti mabhurugwa edu isu vakadzi ane basa guru mufungwa dzevarume vedu. Bhurugwa harisi nhumbi yokupfeka chete nokuti harina basa pakupfeka kwedu. Rine basa pakushanda pafungwa dzevarume vedu.
Imbozama kuti muri pagwendo mafamba 30 minutes nemota iwe woudza murume kuti wakangamwa kupfeka bhurugwa. Uone kuti anodii.
Posted by Mai E Chibwe at 08:20
aaaaaah veduwe inga ndatyoka mbabvu nokuseka aiwa muri vahombe ndoda kunoratidza mukadzi wangu kkkkk
inga ichokwadi murume ukasapfeka underwear ungarumwa ukatambura
18 August 2014 at 11:21
LOL!! murume ukasapfeka underwear, ko ikamira in public inoshaya chinobata kuti zvisaoneke. bhurugwa remukadzi ukariona chete paanogara beya mahwani!
11 March 2015 at 02:13